हुम्लामा तापक्रम माइनस ८ डिग्री पुग्यो : हिमपातपछि चिसोले जनजीवन कष्टकर - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार हुम्लामा तापक्रम माइनस ८ डिग्री पुग्यो : हिमपातपछि चिसोले जनजीवन कष्टकर
२२ पुस हुम्ला । हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढेसँगै यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । हुम्ला उच्च हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातपछि सदरमुकाम सिमकोटसहित उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका क्षेत्रमा चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । आइतबार अपराह्नदेखि सिमकोटलगायत जिल्लाका उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएको र बेँसीमा वर्षा भएसँगै चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको हो । हिउँदयाम सुरु भएसँगै हुम्लाका सबै क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुने गर्छ । अत्याधिक चिसो र हिमपात भएपछि यहाँका नागरिक चिसो छल्न आगो ताप्ने गर्छन् । मौसम परिवर्तनसँगै आइतबारदेखि निकै चिसो बढेपछि सिमकोटको तापक्रम माइनसमा झरेको छ । हुम्लाको तापक्रम माइनस ८ डिग्री सेन्टिग्रेडमा झरेको छ ।
Previous articleप्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न माग
Next articleसंसद विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ सुरु हुँदै
कक्षा १२ को परीक्षा दशै अगाडी नै गर्ने बोर्डको तयारी